2 iminyaka inyanga 1 edlule #856 by PAYSON
Ngisanda kuthola i-imeyili evela kuPeter Hawthorne. Uzwakala sengathi yena nabanye osebenza nabo bafisa ukuhlangana no-Rikooo. Sicela ufunde bese ubona uma ungacabangi ukuthi kubonakala sengathi ukuphela kwamawebhusayithi angamahhala ahamba phambili kulayini. Bona ukuthi ucabangani.
2 iminyaka inyanga 1 edlule #857 by rikoooo
Uxolo kodwa anginayo inkomba yalokho okhuluma ngakho ...?
Futhi angazi ukuthi ngubani uPeter Hawthorne.
2 iminyaka inyanga 1 edlule #858 by PAYSON
Dec 11 (usuku lwe-1 olwedlule)
Ngisanda kufunda AMA-DOWNLOADS FOR FSX, FSX-Steam ne Prepar3D - Rikoooo, ngiyibonisile abanye ozakwabo futhi sicabanga ukuthi ukusebenzisana phakathi kwethu kungasebenza kahle.
Ngimelela i-ejensi yokudayiswa kwe-digital okwamanje isebenza nenkampani ehamba phambili yobuchwepheshe esebenza emakethe efanayo njenge-Android. Singathanda ukufaka okuqukethwe okuyingqayizivele kusayithi lakho egameni leklayenti yethu. Ukuze uthole ilungelo, sizokujabulela ukukukhokhela endaweni ethile ku-$ 65.
Ngitshele imicabango yakho.
2 iminyaka inyanga 1 edlule #859 by PAYSON
2: 34 AM (amahora angu-13 adlule)
Siyabonga ngokubuyela kimi.
Ukuze sikunikeze umbono kulokho esikwenzayo, sizobe sibheka ukubhala okuqukethwe okuxhaswe kusayithi lakho. Lokhu okuqukethwe kuzovame ukufika ngesimo se-athikili yegama le-500 futhi kuzofaka isixhumanisi 'sokwenza okulandelayo' kumakhasimende ethu. Umlobi we-athikili uzochitha isikhathi kusayithi lakho futhi abe nomuzwa wethoni, isitayela, nohlobo lokuqukethwe ovame ukulithumela. Bangaya futhi babhale isihloko esihloselwe ibhulogi yakho. Ungabuyekeza, uhlele futhi unqabe lesi sihloko uma uthola ukuthi akufanelekile. Sifuna ukufaka isandla kwisayithi lakho bese sikukhokhela ilungelo lokukuthumela. Kodwa-ke, asichazi igama lamaklayenti ethu noma ama-brand kulesi sigaba - kuvame ukuphela uma lezi zihloko zithunyelwa ukuze zibuyekezwe.
Uma nje ukhululekile, sizocela ukuthi okuthunyelwe kungabonakaliswa ngokuthi 'kuxhasiwe'.
Kule ndaba, ubungamukela yini izikhala ezixhasiwe www.rikoooo.com/ ? Uma intengo esinikeze ku-imeyili yethu yangaphambilini (i-$ 65 ngeposi) iyamukeleka kuwe, ngitshele nje ukuze siqhubeke.
2 iminyaka inyanga 1 edlule #860 by PAYSON
Lezi yi-imeyili engiyamukelayo. Ngithemba ukuthi ubona ukukhathazeka kwami. Angicabangi ukuthi ngifanele ngisho nokubona lokhu. Olunye uhlobo lwe-SNAFU.
2 iminyaka inyanga 1 edlule - 2 iminyaka inyanga 1 edlule #861 by rikoooo
Ngiyabonga ngempendulo yakho,
Lokhu empeleni kugaxekile futhi lawo ma-imeyili akhiqizwa ngokuzenzekelayo nge-spammer noma bot.
Esinye isibonelo lapha: www.mail-archive.com/[email protected]/msg28201.html
Ukuhlela kokugcina: iminyaka engu-2 inyanga engu-1 edlule rikoooo.